M hụrụ ya, nwalee ya, zụta ya - ọ na-ada ụda, ma nwaanyị ọ bụla maara nke ọma na ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ siri ike. Ezi akpụkpọ ụkwụ abụghị naanị ihe atụ mara mma nke na-ezute ọnọdụ ndị ọhụrụ. Ihe kachasị mma maka akpụkpọ ụkwụ nke nwanyi bụ otu nke na-agbanwe ụkwụ, ọ bụghị nke ọzọ. Ịla nká, ahụhụ, mee ihe - ihe niile a enweghị ihe jikọrọ akpụkpọ ụkwụ nke a pụrụ ịkpọ ntụsara ụkwụ. Achọrọ ịmụta otú ị ga-esi họrọ akpụkpọ ụkwụ dị mma? Ndụmọdụ ndị ọkachamara na nke a ga-enyere aka.
Aro maka ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ
Ikekwe iwu kachasị mkpa nke a ga-agbaso bụ ihe kwesịrị ekwesị. O di nwute, nke a agaghi ekwe omume mgbe nile, dika otutu umuaka choro ahia ahia. Ihe kpatara ihe niile dị iche. Onye na-agbali ịzụta akụkọ ọhụrụ, ọ bụghị natara na ahịa ahịa, onye na-agbalị ịzọpụta, zere ịzụ ahịa ụlọ ahịa. Nke atọ anaghị enwe ohere ịbịa na-eji ejiji ejiji, na ọchịchọ nke ịchọpụta nke ọma. N'okwu a, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ bụghị naanị nkọwa nke onye ahụ mepụtara ka ọ ga-eduzi, kamakwa site na akaebe nke ndị nwere ihere nke otu ụdị.
Nkume ụmụ nwanyị na-enye obi ụtọ ma mara mma, nke ga-enye ndị nwe ha obi ụtọ, ọ bụ naanị ụkwụ ukwu ka a ga-ahọrọ. Ọ dịghị ihe nzuzo na ọ dịghị ihe ọ bụla zuru oke na ahụ mmadụ. Ihe ka ukwuu n'ụkwụ aka ekpe dị ogologo karịa ụkwụ aka nri, ya mere, ọ ga-abụ onye nduzi. Tụkwasị na nke a, ogologo ụkwụ nwere ike ịgbanwe oge, ya mere, mgbe ị zụrụ ụzọ ọzọ, echela naanị nha nke egosiri na ihe nlereanya ahụ. Ihe kwesịrị ekwesị onwe ya ka mma ịhazi maka ọkara nke abụọ nke ụbọchị ahụ, ebe ọ bụ na ụkwụ nwere mmetụta nke na-adaba na mgbede.
E kwesịrị ilebara anya akpụkpọ ụkwụ ahụ anya. Ọ bụrụ na odidi ya adịghị edekọ na ọdịdị nke ụkwụ ahụ, enweghi ike ịkasi gị obi. Lelee ya n'ụzọ dị mfe. O zuru ezu itinye ihe nlereanya ma bilie n'elu mkpịsị ụkwụ gị. Ọ bụrụ na mgbe ị na-agbatị akụkụ ukwu nke ụkwụ na-adaba n'ihu n'ihu akpụkpọ ụkwụ ahụ tupu eriri ederede nke otu, ma n'elu anaghị ejidesi akpụkpọ ahụ ike, akpụkpọ ụkwụ ahụ dabara. Tụkwasị na nke a, ule a ga-ejide n'aka njirimara nke otu na ihe ndị na-emebi mmiri.
Ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị na ikiri ụkwụ maka oge pụrụ iche dịka ụkwụ na ụkwụ, mgbe ahụ akpụkpọ ụkwụ dị mma maka ogologo oge, ọrụ ndị dị n'èzí kwesịrị ịdị ọtụtụ centimeters ogologo, nke mere na n'agbata nnukwu ukwu ahụ ma hapụrụ mita 3-4. Uwe akpụkpọ ụkwụ , akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na akwa ụkwụ ụkwụ na akpụ ụkwụ ụkwụ dị mkpụmkpụ, n'ezie, ejiji, kama ọ dị mma? Ndị ọkà mmụta okpukpe na-adọ aka ná ntị na mkpịsị aka dị n'ụdị ndị a na-edozi n'enweghị ihe ọ bụla, nke na-eduga ná nrụrụ ụkwụ. Ọ na-esote na ụdị ndị a anaghị adabara nwuchi kwa ụbọchị. Esemokwu na nkwekọrịta nke ikiri ụkwụ. N'ezie, "ntutu" na-agbanwe silhouette ahụ, ma n'ihi mgbatị nke etiti nnukwu ike, ahụmahụ ihu ụkwụ bụ ihe dị oke mkpa, nke a na-ejikarị ntụtụ aka na aka ike.
Akụkụ nke nhọrọ nke akpụkpọ ụkwụ oge
Ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ oyi, ọ bara uru ịnye ihe ntanetịị na ụdị ndị dị n'elu ikiri ụkwụ 5-7-centimita na ihe ọkụkụ nke ihe okike. Nhọrọ kachasị mma bụ ihe eji emepụta nke oge a nke na-echekwa ọkụ. Maka oge ozo, akpụkpọ akpụkpọ akpụkpọ anụ ga-eme, dịka ihe okike na-eme ka ọ ghara ịdị na-esochi mmiri. Ma akpụkpọ ụkwụ ezumike dị jụụ maka ụmụ nwanyị - akpụkpọ anụ ya na-akpụ akpụ. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-ahọrọ ụdị ndị kachasị agbagwoju anya n'ụzọ dị mfe, karịsịa ebe ọ bụ na akpụkpọ ụkwụ dị otú ahụ na-ezute ọnọdụ ndị ọhụrụ.
Kedu otu esi ahọrọ ụdị edozi ihu?
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ụmụaka
Kedu otu esi eji ejiji nke ụmụ agbọghọ?
Uwe ejiji maka zuru oke
Akpa na ụdị bokho
Oge ejiji maka ndị inyom mgbe ha dị afọ iri ise
Abụọ nke sweaters
Ụdị ndị ntorobịa
Ndị leukocytes dị elu na ọbara - akpata
Mmanya na ime - ọgwụgwọ
Okpomọkụ maka allergies
19 foto, nke na-egosi ihe pụrụ iche
Ergonomics na imewe
Nhazi nke mmanụ aṅụ
Esi kpochapụ egwu na nchekasị - nkà mmụta uche
Nri si Svetlana Fus
Kedu esi tu akwa ahuboro.
Ọrịa ọrịa mmalite nke repolarization nke ventricles - ihe nzuzo niile nke ECG
Kedu ka ị ga-esi kwupụta onye na-ahụ n'anya?
Ọ nwere ike iri mkpụrụ cherị dị ụtọ mgbe ọ na-efu?
Ọgwụgwọ mmanya na-aba n'ụlọ
Atrophy nke mucosa gastric
Ndị ọrụ nlekota nke Electro maka oge okpomọkụ
Ketotifen - egosi maka ojiji